Fototra Twitter: Ahoana ny fampiasana Twitter (ho an'ny vao manomboka) | Martech Zone
Mbola aloha loatra dia hiantso ny fahafatesan'ny Twitter, na dia tsapako manokana aza fa manohy manao fanavaozana izay tsy manatsara ny sehatra izy ireo. Vao tsy ela izay dia nesorin'izy ireo ny isa azo jerena amin'ny alàlan'ny bokotra sosialy amin'ny tranokala. Tsy azoko an-tsaina ny antony ary hita fa mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny firosoana amin'ny ankapobeny izany raha mijery ny fivezivezena Twitter amin'ny tranokala fandrefesana lehibe ianao.
Ampy izay ny fitarainana… andao jerena ny zavatra tsara! Tsy manam-paharoa amin'ny Internet ny haren'ny tahirin-kevitra tena izy ao amin'ny Twitter. Na dia mety ho resaka amin'ny Internet aza ny Facebook, dia ny Twitter hatrany no ho fona amin'ny fahitako azy. Manasongadina sy manivana ny ankamaroan'ny data ny Facebook, noho izany dia mivaingana ny fampiasana sy ny firotsahana. Tsy izany ao amin'ny Twitter.
Inona no mampiavaka ny Twitter
Twitter dia renirano data izay manohy manidina. Arakaraky ny habetsahan'ny kaonty arahinao no mahamora ny fivezivezena. Saingy tsy voasivana izy io, tsy kendrena ary hita foana. Ary tsy toy ny sehatra sosialy hafa, ny kaonty tianao horesahina dia mora hatonina. Manipy fotsiny an @douglaskarr ary azonao atao ny misarika ny saiko ary manoratra mivantana amiko. Aiza koa no misy an'izany amin'ny Internet? Ary raha te-hanao fikarohana ianao, dia tadiavo fotsiny ilay teny amin'ny alàlan'ny tenifototra, ohatra #Marketing.
Manomboha amin'ny Twitter
Hiditra Mpikambana - ary miezaha mitady fantsona Twitter tsara nefa tsy misy soritra ambany sy fitambarana sarotra. Tsy ny tahony lehibe rehetra no alaina; gaga foana izahay fa mbola afaka mahita tahony marina ho an'ny mpanjifanay. Tena soso-kevitro ny fananana kaonty manokana sy kaonty orinasa fa tsy mifanindry ny roa. Miaraka amin'ny marika iray, ny fampiroboroboana dia antenaina kokoa noho ny amin'ny kaonty manokana izay mety hanorisory ireo olona manandrana hanaraka anao fotsiny.
Atsaharo ny mombamomba anao - tsy misy matoky na manaraka kisary atody, ka aza hadino ny manampy sarinao ho an'ny kaontinao manokana sy sary famantarana ho an'ny orinasanao. Makà fotoana hanamboarana ny volonao loko ary mitadiava sary tsara tarehy izay hisarika ny fahalianan'ny olona.
Tazomy ny Bio anao fohy sy mamy! Ny fanandramana mametaka URL, tenifototra, kaonty hafa ary famaritana fohy dia tsy dia nahasarika. Ity ny tendroniko - inona ny fahaizanao ary inona no mampiavaka anao? Apetraho ao amin'ny bio ianao ary hahita anao ny olona ary hanaraka anao amin'ny fikarohana.
Sintomy ny Apps Twitter
Na eo amin'ny birao, smartphone na tablette ianao dia misy teratany iray Fampiharana Twitter miandry anao! Raha te hivoaka hivoaka ianao dia afaka misintona ary manomboka TweetDeck - sehatra malalaka miaraka amin'ny lakolosy sy sioka rehetra.
Fotoana handefasana tweet
Tweets - Twitter dia niresaka momba ny fanitarana ny isa isa an'ireo bitsika mihoatra ny 140 litera. Manantena aho fa tsy izany, ny ankamaroan'ny zavakanto sy ny fisarihana ny Twitter dia ny fandaniana haingana ny sioka noforonina tsara. Toy ny manoratra haiku; mila fampiharana izany ary mieritreritra ny sasany. Ataovy tsara izany, dia hizara sy hanaraka ny olona.
Mampiasà Hashtags - avo roa heny ny fifandraisanao amin'ny fisafidianana tenifototra iray farafaharatsiny, tsara kokoa ny roa. Raha te hanao vitsivitsy ianao fikarohana hashtag, izahay dia nitanisa sehatra iray taonina (Mahafinaritra tokoa ny RiteTag!). Ny fampiasana tenifototra mahomby dia hahitanao anao rehefa mikaroka momba ilay sehatra ireo mpampiasa Twitter.
Ampitomboy ny tanjonao Twitter
Mitadiava mpitarika ao amin'ny indostriao ao amin'ny Twitter, araho izy ireo, zarao ny atiny, ary mifandraisa amin'izy ireo rehefa afaka manampy lanja amin'ny resaka ianao.
Mikaroha ny mpanjifanao amin'ny Twitter, araho izy ireo, ampio izy ireo, mirotsaha aminy, ary avereno jerena ny atiny mba hamoronana fifandraisana miasa tsara kokoa.
Aza manao peste. Sorohy ireo sehatra hafatra mivantana mandeha ho azy, manoratra amin'ny olona tsy ilaina ary mampiasa mitombo ny mpanara-dia anao tetika. Mahasosotra izy ireo ary mampitombo ny isa anao amin'ny fomba tsy ara-dalàna nefa tsy tena asehony anao ny fahaizanao.
Mandrosoa rehefa manome lanja ianao
Hisy hetsika ho avy? Alaharo ireo bitsika izay manisa ny hetsika miaraka amin'ny torohevitra momba ny tombontsoa azo avy amin'ny mpanaraka anao.
Omeo fihenam-bidy rehefa afaka ianao, Twitter dia tia kaody na fihenam-bidy lehibe.
Aza mampiroborobo fotsiny fa manome sanda. Ny fihainoana ny olan'ny mpanaraka sy ny fanomezana toro-hevitra ampahibemaso dia handoa onitra.
Tsarovy fa ny Tweet dia manidina… rehefa misy zavatra tianao zaraina, zarao imbetsaka.
Ampidiro amin'ny WordPress ny WordPress
Tsindry fizarana mora ara-tsosialy - Ahafahanao mizara, manara-maso ary mampitombo ny fifamoivoizana ara-tsosialinao amin'ny famolavolana fanaingoana sy Analytics Toetoetra.
Ary raha te-hamoaka amin'ny laoniny ny votoatinao ao amin'ny Twitter ianao, ny Jetpack Plugin fampahafantarana amin'ny besinimaro no mahavita azy tsara!
Tadidio fa hazakazaka marathon ny Twitter fa tsy haingam-pandeha. Ampitomboy amin'ny fomba voajanahary ny fanarahana anao ary rehefa mandeha ny fotoana dia ho hitanao ny tombony azo. Sahala amin'ny fahalianana mampitambatra, tsy hiala sasatra ianao aorian'ny bitsika voalohany nataonao. Ity infographic avy amin'ny Salesforce manome fahitana fanampiny… Tsy azoko antoka fa ho mpomba anao ianao (raha misy izany), saingy torohevitra tsara izany.
Tags: mitombo ny mpanaraka anaotenifototrany fomba fampiasana twitterbitsikabitsikaTweetDeckTwitterfampiharana twitterfototra iorenan'ny twittertwitter infographicmahatratra ny twitter
Dec 15, 2015 amin'ny 5: 13 AM
Fitaovana mahafinaritra ho an'ny olona izay mitady haino aman-jery sosialy sy toro-hevitra momba ny SEO… tohizo fa tsara!